Nodimandry teo amin’ny faha-58 taonany : Nahavita be teo amin’ny asa fanaovan-gazety i Maurice Tsihiavonana -
AccueilRaharaham-pirenenaNodimandry teo amin’ny faha-58 taonany : Nahavita be teo amin’ny asa fanaovan-gazety i Maurice Tsihiavonana
Anarana iray tsy zoviana eo amin’ny tontolon’ny serasera sy ny diplomasia. Olona iray nahavita be teo amin’ny sehatry ny asa fanaovan-gazety i Maurice Tsihiavonana. Nahafantaran’ny maro azy ny famakafakana politika, ary maro ireo onjam-peo nitondrany izany. Anarana iray voatonona matetika tamin’ny famakafakana tao amin’ny Radio tsioka Vao tamin’ny fotoan’androny ny anaran’i Maurice Tsihiavonana, niaraka tamin’i Pierre Houlder sy Johary Ravaojanahary. Nahafantarana azy ireo isaka ny tamin’ny 1 ora antoandro ny « FM100 magazine ». Anisan’ny nampiavaka an’i Maurice Tsihiavonana ny fametrahana io « magazine » io tamin’ny fandaharana nataony, ary anisan’ny nahafantaran’ny maro azy farany teo ny « On Air Magazine ». Saika nahaliana ireo mpanara-baovao politika ny famakafakana ataon’izy ireo isaka ny antoandro tamin’izany fotoana izany.
Taorian’ny Radio Tsioka Vao, dia nitondra ny fahaizany amin’ny fanadihadiana politika tamin’ny onjam-peo samihafa izy ary anisan’izany ny tao amin’ny Radio Antsiva. « Nanana ilay fandaharana Antsiva Miatrika izahay tamin’ny fotoan’androny, ary heno amin’ny onjam-peo isaka ny sabotsy antoandro tany amin’ny taona 2000 tany », araka ny fitantaran’i Annick Raherimanana, tompon’andraikitra voalohan’ny radio Antsiva. Efa nitondra izany talentany izany tamin’ny onjam-peo hafa ihany koa izy toa ny onjam-peo Viva ary talen’ny on Air Radio sy Fahitalavitra izy nialohan’ny nandaozany ny tontolon’ny serasera. « Manana paikady manokana i Maurice Tsihiavonana teo amin’ny sehatry ny famakafakana. Ankoatra ny fahaizany mitana ny mpihaino dia mora raisina ary takatry ny sarababem-bahoaka ny famakafakana ataony », hoy ihany Annick Raherimanana. Anisan’ireo heverina fa nahasarika azy tamin’ny mpanao politika sy mpitondra nifandimby izany, ka niantsoan’izy ireo azy amin’ny fampitana hevitra. « Efa nanana fahalalana ara-politika ambony be i Maurice Tsihiavonana ka mora ho azy ny nampivady ny asa fanaovan-gazety sy ny famakafakana », hoy indray Johary Ravaojanahary, Talen’ny Ortm, ary mpanao gazety sy mpamakafaka niaraka taminy tao amin’ny Radio tsioka Vao tany amin’ny taona 90. Ny taona 1994 no nanomboka niditra tamin’ny asa fanaovan-gazety sy ny famakafakana na dia ny tontolon’ny fitsaboana aza no nianarany teny amin’ny ambaratonga ambony. Faniriany ary tanteraka ny hanao gazety indrindra ny famakafakana politika. « Nifanampy taminy mba ahatsara ny famakafakana izahay tamin’ny fanoroana azy ny teknika momba ny asan-gazety ary vetivety izy dia nanana ny toerany teo amin’izay sehatra izay », hoy hatrany izy.
Tao anatin’izay 24 taona nidirany teo amin’ny sehatry ny asa fanaovan-gazety izay, dia tsy mitsahatra ny mizara izay hainy sy mampianatra ireo ankizy taty aoriana i Maurice Tsihiavonana. Saika manamarina izany ireo mpanao gazety tanora avy amin’ireo toeram-piasana nandalovany.
Tamin’ny ankapobeny dia fiainan’i Maurice Tsihiavonana andavanandro ny fanaraha-maso ny raharaha politika teto Madagasikara, ary anisan’ireo nifampizara izany taminy i Pierre Houlder. « Na eny an-dalana, na an-tranon’ny iray amin’izy ireo dia tsy resaka fa tsy politika androatokon’ny resak’izy mirahalahy », hoy hatrany ny fanazavan’i Johary Ravaojanahary. Anisan’ireo tsaroan’i Annick Raherimanana tamin’ny resaka nataony tamin’ny fiaraha-miasa tamin’ireo mpanao politika samihafa ny hoe « tsy voatery hanompo mpanao politika iray ny mpanao gazety ». Tamin’ireo famakafakana nataony, dia maro ny nahatsikaritra fa tsy mba mamaly na mifanenjika amin’ireo mpanao famakafakana hafa izy, fa nanana kosa ny lalan-jotra arahiny eo amin’ny fijerena ny tontolo politika. Nanamafy rahateo Johary Ravaojanahary fa « nanana fomba fijery manokana mahasarika azy, ary tsy hitovizany amin’ny fijerin’ny mpanao gazety hafa i Maurice Tsihiavonana ».